Okulandelayo | Ikusasa Lomsebenzi
Indlela Okulandelayo™ kudala ikusasa lomsebenzi
I-NextMping ™ igxile ekusaseni lomsebenzi kanye nezinyathelo ezilandelayo ezilandelayo. Amakhasimende ethu ahlonishwayo asisebenzisa ukuhlela kahle isonto elilandelayo, unyaka olandelayo, noma iminyaka eyishumi elandelayo.
Inqubo yethu ye-NextMiling ™ inikeza umongo wokusiza amaklayenti ukuthi enze ukuvuvukala okumangazayo kwenqubekela phambili kanye noshintsho oluzinzile emsebenzini oludingekayo ukuze ulungele ikusasa manje.
I-NextMapping ™ ikusasa elihlukile futhi elihlobene nokusebenza kwemodeli yesinqumo somsebenzi eyakha ukucaca kanye nezinyathelo ezisebenzayo zomphumela wokuqhamuka ngokushesha nowesikhathi eside kumakhasimende / abasebenzi futhi ekugcineni umhlaba.
Yini i-NextMapping™ inqubo?
Wonke amabhizinisi anezinselelo ezingafani namathuba.
Ukuze uhlele futhi uqambe i-NextMapping™ okwakho, siqala ukuxhumana nawe nethimba lakho - bese siqhuba olwethu ucwaningo lokuqala - ukuthola ukuqonda 'isimo sakho samanje'.
Inselelo ejwayelekile kubaholi namaqembu ukuthi babona ibhizinisi labo ngelensi eyodwa noma ngombono. Ukusungula umbono ophelele, sinombono omuhle futhi sikwethula kabusha wena nethimba lakho kunhlangano yakho - kusuka kwilensi 'yezindlela eziningi' yekusasa lomsebenzi.
Ngokuqonda okuhlanganyelwayo kwenhlangano, manje siyabuza, "Linjani kumephu yesimo esizayo?" Ukwakha kusuka kokuthambekela kokukhula kanye nokwesikhathi esizayo okusekelwa idatha yocwaningo esinikeza ngayo ingqikithi ikusasa lilungile manje.
Sihlome ngohlaka lomongo lwekusasa lomsebenzi, manje siqoqa impendulo yakho. Ngokuvota okubukhoma, izingxoxo nezingxoxo sigcizelela imininingwane eqoqwe kusuka kuwe nethimba lakho bese iphindisela impendulo ehlanganisiwe.
Ngemuva kokuthwebula okufundile futhi sahlola imibono, sehlisa lokho okushiwo yinhlangano yakho. Sixhuma amachashazi, sichaza umbono kanye nemephu yakho yokuthi ikusasa lomsebenzi lingabukeka kanjani ngebhizinisi lakho.
Sidale ikusasa lakho lemephu yomsebenzi - manje yisikhathi sokuqalisa. Isigaba sokugcina ku-NextMapping™ ukuchaza izinyathelo ezisebenzayo ezidingekayo enhlanganweni yakho ukufezekisa lombono.